Ekoatera manafoana fiantohana ara-pahasalamana tsy maintsy atao ho an'ireo mpizahatany vahiny
Home » Toerana fitsangatsanganana » Ekoatera manafoana fiantohana ara-pahasalamana tsy maintsy atao ho an'ireo mpizahatany vahiny
Aogositra 23, 2018
Ireo mpizahatany iraisam-pirenena miditra ao amin'ny kaontinanta Ekoatera dia tsy mila maka fiantohana ara-pahasalamana intsony, araka ny lalàna farany teo.
Mpizahatany vahiny miditra Kaontinanta Ekoatera dia tsy mila maka fiantohana ara-pahasalamana intsony, araka ny lalàna voajanahary farany teo momba ny fampiroboroboana ny famokarana, ny fisarihana ny famatsiam-bola, ny fampitomboana ny asa ary ny fifandanjana ara-bola nanomboka ny talata 21 aogositra 2018 lasa teo, taorian'ny namoahana azy tao amin'ny rejisitra ofisialy .
Ny laharana 1 amin'ny andininy faha-44 dia manolotra ny fanafoanana ny andalana fahadimy amin'ny andininy faha-56 amin'ny lalàna voajanahary momba ny fivezivezena amin'ny maha-olombelona, ​​izay nametraka ny fiantohana fiantohana ho an'ny fizahantany mpifindra monina ho fepetra takiana amin'ny fidirana ao amin'ny kaontinanta Ekoatera.
Ny fanafoanana ny fiantohana ara-pahasalamana, natolotry ny lehiben'ny minisiteran'ny fizahantany, Enrique Ponce De León, ary notohanan'ny filohan'ny Repoblika Lenin Moreno Garcés tanteraka, dia mitazona ny fifaninanana fizahan-tany eto amin'ny firenena fa tsy mampiakatra ny vidiny ho an'ireo olona tonga. hankafy an'i Ekoatera. Amin'izany fomba izany dia mihabetsaka ny fanohanana ny indostrian'ny fizahan-tany mandray ny firenena.
Ekoatora, Repoblikan'i Ekoatera amin'ny fomba ofisialy, dia repoblika demokratika solontenan'ny Amerika avaratra andrefana, izay mifanila amin'i Kolombia dia any avaratra, Peroa amin'ny atsinanana sy atsimo, ary ny Oseana Pasifika any andrefana. Ekoatera koa dia ahitana ny Nosy Galápagos any Pasifika, sahabo ho 1,000 620 kilometatra (XNUMX mi) andrefan'ny tanibe. Ny renivohitra dia Quito, raha ny tanàna lehibe indrindra dia Guayaquil.
Ny any Ekoatera izao dia fonenan'ny vondrona amerindiana isan-karazany izay tafiditra tsikelikely tao amin'ny Fanjakana Inca nandritra ny taonjato faha-15. Ny faritany dia nanjanaka an'i Espana nandritra ny taonjato faha-16, nahatratra ny fahaleovan-tena tamin'ny 1820 ho anisan'ny Gran Colombia, izay nipoirany ho fanjakana manana fiandrianany manokana tamin'ny 1830. Ny lova navoakan'ny empira roa tonta dia hita taratra amin'ny isam-pokontany misy an'i Ekoatera, miaraka amin'ny ankamaroan'ny 16.4 tapitrisa ny olona metisy, arahin'andriana maro an'isa eropeana, amerindiana ary afrikanina. Ny Espaniôla no fiteny ofisialy ary ampiasain'ny ankamaroan'ny mponina, na dia fiteny amerikana 13 aza no ekena, anisan'izany ny Quichua sy Shuar.
Holanda dia mahita ny fiakaran'ny turista avy any India